त्रिविमा ‘गैरकानुनी’ प्रश्नपत्र र परीक्षाफलमाथि नै प्रश्न « रिपोर्टर्स नेपाल
त्रिविमा ‘गैरकानुनी’ प्रश्नपत्र र परीक्षाफलमाथि नै प्रश्न
रिपोर्टर्स नेपाल खोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर परीक्षाफल समेत प्रकाशित गरेको एउटा विषयले त्रिविका अधिकारीहरुको गतिविधिमाथि कानुनी प्रश्न उठेको छ । स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकान्सिकको प्रश्नमा कुल ४५ पूर्णांकमा ३५ अंक पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको र प्रश्नपत्र बाँडेर पुनः फिर्ता लिइएको अवस्थामा परीक्षा पुनः संचालन गरिएपछि विवाद बनेको हो ।
एकातर्फ पाठ्यक्रम बाहिर गरिसकेको अवस्थामा नियमविपरित पुनः परीक्षा संचालनमा गरिएको छ । डेढ घन्टा परीक्षा रोकेर पुनः सुचारु गर्दा प्रश्नपत्रको गोपनियता रहेको छैन । यस घटनालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लुकाउन खोजेपछि बाहिर आयो । प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमबाहिरको प्रश्न रहेको र प्रश्नपत्र एकपटक बाहिर ल्याएर पुनः सोही प्रश्नपत्रबाट परीक्षा संचालन गर्दा कानुनी प्रश्न खडा हुन्छ ।
यसबारे विद्यार्थीले उजूरी गरेपछि राय सुझाव लिन समिति समेत गठन भयो । समितिले सबै प्रश्न कोर्स भित्रबाट सोधिएको भन्दै सुझाव पेश गर्यो । यसैका आधारमा शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डा. सुधा त्रिपाठीले परीक्षा कायमै राख्न र परीक्षाफल प्रकाशित गर्न लेखिन् । तर, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयबाट त्रुटी भेटिएर कानुनी जटिलता आउने देखेर उनले भदौ ४ गते पुरानो निर्देशन फिर्ता लिई नयाँ निर्देशन दिइएको पत्र पठाइन् । नयाँ निर्देशनमा विगतको निष्कर्षहरु कार्यान्वयनका लागि दिइएको निर्देशनलाई फिर्ता लिइएको भनिएको छ । विगतमा छानविन समिति गठन गरी आवश्यक कामकारबाही गर्नु भनिएको थियो । यसैका आधारमा समिति बनाई प्रश्नपत्र र परीक्षालाई सही ठहर्याएर परीक्षाफल प्रकाशित गरियो ।
त्रिपाठीको पुरानो निर्देशन फिर्ता लिने निर्णयले परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको विषय विवादमा परेको छ । अब उनको पुरानो निर्देशन फिर्तालाई लिएर कानुनी उपचारमा जाँदा परीक्षा र परीक्षाफल दुवै रद्द हुनसक्छ । जसका कारण सयौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुनसक्छ । परीक्षा लिंदा र प्रश्नपत्र बनाउँदा नै विवादास्पद काम गरेपछि डनको कार्यालय देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत विवादमा तानिएको छ ।
२९ पौष २०७५ मा स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरको क्वान्टम मेकानिकको पुरानो पाठ्यक्रमको परीक्षा लिइएको थियो । परीक्षाफल १२ वैशाख २०७६ मा प्रकाशित गरिसकिएको छ । यस अवस्थामा त्रिविले त्रुटी ढाकछोप गर्न खोज्दा कानुनी जटिलता थपिएको हो । शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी, हाल कार्यवाहक उपकुलपति ले समेत विगतको गल्तीले कानुनी जटिलता आउनसक्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिएको भनेबाट परीक्षा र परीक्षाफल नै विवादमा तानिएको हो ।
कोरोनासँग जुध्न कफर्यु लाग्ला ?
काठमाडौं, २० साउन । ‘लकडाउन गर्नुपर्नेमा लगभग सबै विज्ञको सुझाव रह्यो । तर, लकडाउनको ढाँचा
रिपोर्टर्स क्लबको ‘गाइजात्रा विशेष’ मा कलाकारले भने– नेताहरु ३६५ दिन नै गाइजात्रा झिक्छन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २० साउन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा गाइजात्रा विशेषमा बोल्दै हाँस्य कलाकार तथा व्यङ्ग्यकारहरुले प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीद्वारा कोभिड–१९ बारे विज्ञहरूसँग परामर्श, शेरबहादुर देउवाको ७ बुँदे सुझाव
काठमाडौं, २० साउन । प्रमुख प्रतिपषी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
प्रचण्डद्वारा बामदेवसँग भैंसेपाटीमा छ बुँदे प्रस्तावबारे छलफल
काठमाडौं, २० साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमबीच
गाइजात्राका झलक (फोटोफिचर)
रिपोर्टर्स नेपाल, २० साउन । आज काठमाडौ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा गाइजात्रा मनाइएको छ ।
लकडाउनमा जाने सरकारको तयारी, प्रधानमन्त्री ओली देउवा र ठाकुरसँग बसेर विज्ञसँग परामर्श
काठमाडौं, २० साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि फेरि कडा कदम
एजेन्सी, २० साउन । भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि स्पेनका पूर्व राजा जुआ कार्लोसले देश छाडेका छन् ।
आज गाईजात्रा: उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं, साउन २० । भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म आठ दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक उत्सव ‘गाईजात्रा’
सिन्धुपाल्चोक, २० साउन: सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–२ बरुवामा एक जनाको शव फेला परेको छ ।
सरकारी कार्यालयमा विस्फोट गराउने दोषि ९ वर्षपछि पक्राउ
राँझा, २० साउन: सरकारी कार्यालयमा बम विस्फोट गराएर फरार दोषिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ९